Suunka birta leh naqshad aad u guuleysan oo loogu talagalay Apple Watch | Waxaan ka socdaa mac
Suunka birta oo leh naqshad aad u guuleysan oo loogu talagalay Apple Watch
Way cadahay in dunta dunta loogu talagalay Apple Watch Dhammaad ma leh waana in maalin kasta aan heli karno fikrado cusub oo aan horay loo arag. Isla sidaas oo kale ayaa igu dhacday markii aan helay suunka aan doonayo inaan maanta ku tuso wanaagiisa.
Waa suunka birta ah ee aad ku iibsan karto afar dhammeystir anodized oo kala duwan, oo lagu soo saaray fikradda malabka oo la sameeyay by qaybo badan oo shaqsiyadeed oo la xariiray si ay u noqdaan suunka ugu dambeeya.
Haddii aad jeceshahay xargaha Apple Watch-kaaga, waxaa hubaal ah inay noqon doonto mid ka mid ah kuwa aad jaceyl u qaadi doonto inta ugu badan iyo saameynta ay ku siiso curcurka markaad xirato waa wax aan caadi ahayn. Sida aad ku arki karto sawirada iyo sidii aan horeyba u soo sharaxay, Boqolaal qaybood oo qaab geesoolayaal u qaabeysan ayaa la isticmaalay si loo sameeyo suunka jilicsan oo aad u qaabeysan.
Xidhitaankiisu wuxuu bixiyaa nabadgelyo dheeri ah sidaa darteed waxaan hubin karnaa inuusan furi doonin inta aan ku sii jirno. Waxaa jira afar midab oo si fiican loo kala soocay kuwa ay leeyihiin, dahab, dahab dahab, qalin iyo bir madow oo dhalaalaya. Barroosinka Apple Watch wuxuu raacayaa isla fikradda la mid ah tan xargaha Apple.
Qiimaheedu waa 13,69 euros Adiguna waxaad u haysaa labada kiis ee Apple Watch ee jira, 38mm iyo 42mm. Marka haddii aragtida maqaalkan ay soo jiidatay dareenkaaga oo aad u timid akhriskaan fog, waxaan kugula talinayaa inaad booqato isku xirka xiga iyo inaad adigu hada iibsato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Suunka birta oo leh naqshad aad u guuleysan oo loogu talagalay Apple Watch
Diyaaradda drone-ka iyo kamaradda DJI ma xiriir la leedahay Apple inta aan ka fikirno?
9x11 Podcast: Dhammaan wixii ku saabsan Nidaamyada NAS